बा’ख्रा चराउन गएकी टिकीसरा मुखमा कपडा को’चेर : धा’रिलो ह’तियार प्र’हार ह’त्या गर्ने प’क्राउ! – Life Nepali
बा’ख्रा चराउन गएकी टिकीसरा मुखमा कपडा को’चेर : धा’रिलो ह’तियार प्र’हार ह’त्या गर्ने प’क्राउ!
बुटवल उपमहानगरपालिका– ३ ज्योति नगरकी एक महिलाको धा रिलो ह तियार प्र’हार गरी ह त्या भएको छ । असोज १७ गते नै ६६ वर्षीया टिकीसरा गुरुङको ह त्या भए पनि इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सो जानकारी गराइएको हो । घरबाट बा’ख्रा चराउन गएकी गुरुङ साँझसम्म घर नफर्किएपछि खोज तलास गर्ने क्रममा लक्ष्मीनगर सामुदायिक ज’ङ्गलमा उनको श’व भेटिएको थियो ।
प्रहरीले ह त्याको आरोपमा हेटौँडा उपमहानगरपालिका– ६ घर भई हाल बुटवल ज्योतिनगर बस्ने ४२ वर्षीय राम लामालाई पक्राउ गरेको छ । उनले टा’उकामा हँ’सिया प्र’हार गरी मुखमा क’पडा को’चेर गुरुङको ह त्या गरेको स्वी’कार गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी नायब उपरीक्षक भीमलाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
लामालाई असोज २५ गते नुवाकोटको बेलकोटगढीबाट प’क्राउ गरिएको उहाँले बताउनुभयो । लामाको साथबाट टिकीसराको ह त्यामा प्रयोग भएको हँ सिया, कानमा लगाउने सुनका रिङ बरामद गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक भट्टराईले बताउनुभयो । लामालाई हिरासतमा राखेर कर्तव्य ज्या न र डाँ’का चोरी मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
Previous घरमै पर-पु’रुषसंग भे’टेपछि कैलालीमा श्री’मानद्वारा श्री’मतीको ह’त्या !
Next हाँस्यसिरियल सक्किगोनि विरुद्ध मिडिया हबले हाल्यो प्रहरीमा उजुरी